Ny kely ananana aza, mbola alaina | NewsMada
Ny kely ananana aza, mbola alaina
« Sotro ranon’alika, hono, ka farany vao misy ventiny ». Sao mba izany tokoa ny ilazana ity faramparan’ny taona madiva hifarana ity? Faniriana sy hetaheta ary firarian-tsoa toy ny fanaontsika Malagasy ihany izany, toy ilay fifampiarahabana nahatrarana ny taona vaovao, fanaon’ny isam-pianakaviana sy ny isam-piarahamonina.
Fiteny fe fiteny ihany io voalaza io, fa sao “faly sahirana toy ny vahiny tolorana vozon’akoho tanora, jeren’ny maso toa hena azo hanina, tsakoin’ny nify toa taolana mikarepoka”. Izany hoe, misy ireo nahita nofony nandritra ny taona fa tsy vitsy koa ireo sendra ny taolana.
Fanao tokoa mantsy ny manao jery todika ny tany aloha mialoha ny haminavinana ny ho avy. Mety ho faly ny mpitondra fa nahomby ny fikarakarana fivoriambe iraisam-pirenena samihafa teto Madagasikara, nahazo fanomezan-toky avy amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena sy ny fampiasam-bola tsy miankina, mitentina hatrany amin’ny 10 miliara dolara.
Raha tarafina aty amin’ny vahoaka entina anefa, toa tsy izay loatra ny zavatra hita sy iainana. Maro ireo sahirana ara-pivelomana, vao mainka saika tratry ny “kely ananany aza mbola alaina aminy”. Tsy afaka nitarika posy sy sarety entin-tanana, mifanenjika isan’andro amin’ny polisy kaominaly, tsy ampy ny rano fisotro sy ny sakafo, tsy mirotsaka ny orana ka tsy afaka mamboly, indrindra ny vary sakafo fototry ny Malagasy, tsy afaka nianatra intsony ny ankizy satria nisondrotra ny saram-pidirana any an-tsekoly, sns.
Tsy ny fivelomana ihany no tra-pahasahiranana, fa hatramin’ny fitompoana ny tany koa. Miahiahy ny mponina any ambanivohitra rehetra any amin’ity fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ity. Ny iray metatra ambonin’ny tany ihany ny an’ny vahoaka sy ny olon-tsotra, fa azon’ny fanjakana zarainy amin’ny mpitrandraka ny ao ambaniny. Saika tsy manana taratasy ara-panjakana ny ankamaroan’ny tany eto amintsika, na nolovaina tamin’ny ray aman-dreny sy ny razana niandohana aza. Misy mihitsy ireo voakasika hatramin’ny fasan-drazany! Loza!